နှာခေါင်းစည်း - Koupang Myanmar
2021-04-26 Koupang Myanmar
Covid-19 ကူးစက်ခံထားရပြီးမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သေးလား??
Covid-19 ကူးစက်ခံထားရပြီးမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သေးလား?? Covid-19 ကူးစက်ခံထားရသူများသည် ရောဂါပိုးကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သို့သော် ခုခံအားကျဆင်းမှုအပေါ် မူတည်၍ ဘယ်လောက်ကြာကြာခံနိုင်မလဲဆိုတာ အတိအကျ မသိနိုင်သောကြောင့် ယခင် ကူးစက်ခံထားရသူများလည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်သည်။ အမေရိကန် CDC အကြံပေးကော်မတီဝင်အချို့ကလွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း Covid-19 ရှိခဲ့သူများသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် စောင့်ဆိုင်းစာရင်း၏နောက်ဆုံးတွင်ရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြုကြသည်။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးရမည့် အကြိမ် အရေအတွက်နှင့် ဈေးနှုန်းသည် အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ AstraZeneca, Pfizer နှင့် Moderna ကာကွယ်ဆေးများကို နှစ်ကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရမည် ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်အပြီး နောက်ထပ်ထပ်မံထိုးနှံခြင်းကာလသည် AstraZeneca နှင့် Moderna ဆေး အမျိုးအစားအတွက် ၄ ပတ်၊ Pfizer သည် ၃ ပတ်ဖြစ်ပြီး ၉၅% ကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။…
2021-04-21 Koupang Myanmar
ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ကိုယ်ခံအား အကျိုးသက်ရောက်မှု မည်မျှကြာမည်နည်း?
ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ကိုယ်ခံအား အကျိုးသက်ရောက်မှု မည်မျှကြာမည်နည်း? ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ antibody ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ တုပ်ကွေးဟု လူသိများသော ရာသီအလိုက်တုပ်ကွေးသည် ကာကွယ်ဆေးသက်တမ်း သုံးလမှခြောက်လအထိ ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် တုပ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ရန် နှစ်စဉ် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုး ထိုးရန် လိုအပ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အသက် ၂၀- ၂၅ နှစ်အထိတစ်ကြိမ်တည်း ဆေးထိုးခြင့်ဖြင့် အကျိုးသက်ရောက် သည့် ကာကွယ်ဆေးများ သို့မဟုတ် တစ်ချိန်က ကျောက်ရောဂါ(သို့) ပိုလီယို စသည့်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်သည့် ကာကွယ်ဆေးများရှိပါသည်။ Covid-19 ကိုကာကွယ်သော Pfizer, Moderna နှင့် AstraZeneca ကဲ့သို့သောကာကွယ်ဆေးများဆိုရင်ကော.. ထို ကာကွယ်ဆေးများသည် ယခုကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုနေသောကြောင့် ဆေး​၏ ခုခံအားသည် မည်မျှကြာရှည်မည်ကို မတိအကျ မသိရသေးပါ။ အနည်းဆုံးလအနည်းငယ်မှတစ်နှစ်အထိ…
ကိုယ်အပူချိန်တက်နေတဲ့အချိန် သို့မဟုတ် ဖျားနာနေတဲ့အချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သလား?
ကိုယ်အပူချိန်တက်နေတဲ့အချိန် သို့မဟုတ် ဖျားနာနေတဲ့အချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်သလား? ကာကွယ်ဆေးထိုးရာတွင် နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းများထဲမှတစ်ခုက ကာကွယ်ဆေးများသည် ရောဂါ ကုသပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ခံအားကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပြီး ကုသခြင်းမဟုတ်ပါ ထို့ကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်နေသောအချိန်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် ကာကွယ်ဆေးတွင်ပါသော ရောဂါပိုးကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေ ပိုများသည်။
New symptoms of covid19 ကိုဗစ် အသစ်
New symptoms of covid19 ကိုဗစ် အသစ် – မျက်စိနာမယ် – အဖိန့် တွေထပြီး အင်ပြင်ထသလို ယားမယ် – ဝမ်း လျောမယ် – လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းလေး တွေအရောင် ပြောင်းလာမယ် – ဖျားတာ၊ လည်ချောင်းနာတာ၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အနံ့ ပျောက်တာ တွေလည်း အရင်လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့ *အပြင်ထွက်ရင် mask & Face shield တွေပြန်တတ်ကြပါစို့ Credit Dr. Harry Ye Thu
btqt Foam Cleanser Ks12,000 Ks9,000
btqt Skin Care Set Ks110,000 Ks20,000
BTS Calendar 2021 Ks8,000
One Aid KF94 Mask / Made in Korea Ks2,000 Ks1,700
One Aid KF94 Mask / Made in Korea (30psc) Ks51,000 Ks38,000